M na ọ, mgbe ahụ, Na Unbelief Na Jesus — njem Lee - Official Site
M na ọ, mgbe ahụ, na ekweghi-ekwe na Jesus (Ekweghị na Jizọs) na-ịgbakụta Jesus ịchọ afọ ojuju na ihe ndị ọzọ. Na ikwere na Jizọs na-abịa Jesus n'ihi na afọ ojuju nke na-akpa anyị na anyị agụụ.
Okwukwe abụghị tumadi nkwekọrịta na eziokwu na isi; ọ bụ tumadi agụụ na obi nke fastens on Jesus n'ihi na afọ ojuju. [Jesus na-ekwu,,] 'Onye na-abịakwute m agagh agụụ na onye na-ekwerekwa na Mụ agaghi-ya nku!'